USNEYA FAARUQIN: SIFOOYIN FAA'IIDO LEH IYO KHILAAFAADKA, SHARAXAADDA DHIRTA IYO AWOODA DAWEYNTA EE GEEDAHA - DHEEF IYO WAXYEELLO
Ugu Weyn Ee Dheef iyo waxyeello
Usneya waa dharbaaxo, waa daaweyn dabiici ah oo adag. Lichen thalli waxaa loo isticmaalaa dib u soo kabashada, daaweynta cudurada kala duwan. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, waxaa lagu yaqaanay sifooyinka wanaagsan ee dhirta. Cunnada daaweynta ayaa laga soo gudbiyey jiilka ilaa qarnigana way ka badbaaday ilaa maanta.
Usneya waa dhar laamood leh oo leh shukuk dheer, taas oo la mid ah gadhka (halkan magaca). Thallus wuxuu u koraa 100-200 cm waxana uu leeyahay hoos ah huruud ah-cagaaran. Geedka hareeraha waa la jarjaray, oo dhexda dhexe ee laamiyada ee khafiifka ah ayaa la dhisay qoryaha cufnaanta culus. Laamihiisu waa wareegsan yihiin, adag yihiin, timo u eg oo ku yaalla talooyinka, oo leh qoryaha yar yar. Sababtoo ah muuqaalka nooca usnyu waxaa sidoo kale loo yaqaan "gadhka shaydaanka" ama "shaashadda qallalan".
Warshadda waxaa loo qaybiyaa cimilada dabiiciga ah, badiyaa kaymaha caleenta ah, marmar dhif ah. "Gadhka gobalka" wuxuu ku koraa laanta iyo geedaha dhirta, iyo mararka qaarkood dhagxaanta. Usneya wuxuu jecel yahay goobaha qoyan iyo iftiinka, kuwaas oo ka fog magaalooyinka, warshadaha iyo waddooyinka. Warshadu ma aha dulin, laakiin waxay u adeegsaneysaa laamaha geedaha sida taageero.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah dhowaan la helay ee Maraykanka ayaa lagu magacaabay sharafkii madaxweynaha 44aad ee dawladaan - Barack Obama.
Usninic acid (qiyaastii 1.12%) ayaa ku jira afka, kaas oo ah antibiyooti dabiici ah. Sidoo kale waxaa ku jira Usney:
Thyme, propolis, bocorka, caleemaha Manchurian ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa antibiyootig dabiici ah.
Ma taqaanaa? Lichens waa mid ka mid ah noolaha nool ee ugu dheer nool dunida. Da'doodu waxay gaari kartaa dhowr boqol, marmarna kumanaan sanadood.
Gargaarka Caafimaadka: Awoodda bogsashada
Guryaha bogsashada ee gadhka gobalka waa la yaqaan muddo dheer. On jidhka bini'aadamku wuxuu leeyahay:
ficil bacteriostatic ah.
Sababtoo ah ka kooban, geedka waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada kala duwan iyo ujeedooyinka qurxinta.
Ujeedooyinka daawooyinka, isticmaal khad kale - Parmelia.
Usnea waa daawada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee daaweyn kara ARV, hargabka, tiibishada, oof-wareen, cudurada neefsashada. Lichen waxay awood u leedahay inay dhaqdhaqaajiso nidaamka difaaca jirka, caadi ahaan cadaadiska dhiigga, hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka. Warshadu waxay saameyn wanaagsan ku leedahay habka wadnaha iyo xididada jirka. Isticmaal usneyu leh barar afka iyo afka, oo leh cudurrada xubnaha kaadida. Sababtoo ah ficilka antimicrobial, wuxuu awoodaa in uu daaweeyo nudaha, nabarada iyo nabarrada muddo dheer. Sida wakiilka lidka bakteeriyada, waxaa loo isticmaalaa gubashada, cudurrada purulent ee unugyada jilicsan. Geedhu waxay u fiicantahay maqnaashaha, maqaarka, boogaha, infekshanka fungal.
In bogsashada dad, lichen, weheliso geedo kale, waxaa loo isticmaalaa daaweynta neefta, xiiqdheerta. Saameynta wanaagsan ee Usnea waxaa ku jira cudurka angina, cudurka thyroid. Fududaha "gadhka shaydaanka" waxaa loo isticmaalaa daaweynta kansarka.
Wixii daaweynta neefta neefsashada waxay isticmaashaa saxafrajka, raadinta, kor u, aloe, malayga.
Usney Bootey ayaa inta badan loo isticmaalaa ujeedooyin qurux badan. Soo saaridda dhirta waa qayb ka mid ah deodorants, jellar, kiriimyada, cadayga, sunshadaha. Isticmaal warshadda daaweynta dermatitis, saliida xayawaanka. Waxaa sidoo kale wanaagsan in laga takhaluso lakabyada iyo da'da da'da. Qubeyska oo lagu daro budada Usnei waxay caadi u tahay wax soo saarka melanin ee maqaarka.
"Gadhka gobalka" waa daawo dabiici ah oo dabiici ah. Laakiin waxaa jira dhowr waxyaalood oo khuseeya isticmaalka lichen. Uma isticmaali kartid cawska inta aad uurka leedahay iyo nuujinta, maadaama cagaarshowga aaladda dabiiciga ah uu si xun u saameyn karo ilmaha. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in lagu daweeyo dadka nadiifka ah ee u nugul iodine. Ku bilaw daaweynta lichen waa in si taxadar leh loo eego, maadaama ay jirto fursad ah in qof isku dulqaadka shakhsiyadeed.
Waa muhiim! Si looga hortago cawaaqib xun, waxaa muhiim ah in la ixtiraamo qiyaasta iyo muddada daaweynta.
Dhirta Thallus waxaa la goyn karaa sanadka oo dhan. Usnea si tartiib ah ayuu u koraa, marka marka la ururiyo waa lagama maarmaan in laga tago qeyb yar oo ka mid ah cirifka, si uu dhirta u kabsado. Dhirta waa in laga nadiifiyaa qashin, tusaale ahaan, dhirta, cirbadaha, dhulka, ciidda. Kadibna xaaqda ayaa la qalajiyey heerkul ah +25 C Usneya wuxuu si fudud u nuugaa qoyaanka, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la kaydiyo alaabta ceeriin ee meel qallalan, meel la ilaaliyo, laga ilaaliyo qorraxda iyo heerkul aan ka sarreynin isla +25 C. C. Cawska ayaa lagu duubi karaa baakadaha warqadaha oo lagu rido roog. Xaaladaha saxda ah, alaabta ceeriin ayaa loo kaydin karaa waqti dheer.
Cunnooyinka xakamaynta bogsashada
Ka fikir sida loo diyaariyo mukhaadaraadka daawada laga bilaabo useska.
Tincture khamriga: sida loo qaato
Si aad u diyaariso tincture waxay u baahan doontaa:
jajab usneya - 3 tbsp. l.
khamriga 40% - 0.5 l.
Waxyaabaha qashinka waxaa lagu shubay aalkolo oo ku rid weelka meel gudcur ah. Ku adkeyso dawada 14 maalmood, si tartiib ah u ruxayso dhalada maalin kasta. Qaado daawada keentay waa 15-20 daqiiqo cuntada ka hor, 1 tbsp. l saddex jeer maalintii. Muddada daaweynta waa 30 maalmood.
Tincture alkolada waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunka, oo leh dhibaatooyinka mareenka caloosha iyo mindhicirka, si loo hagaajiyo cunto xumo.
Veronica officinalis, tarragon, coltsfoot, løvetann, geedka goosashada, ka soocidda peony wuxuu gacan ka geysan doonaa hagaajinta rabitaanka cuntada.
Si aad u daadiso budada, waxaad u baahan tahay inaad ku xoqdo cawska miisaanka ee Booqdaha kafeega leh isla qiyaasta celandineka qalalan. Waxa kale oo aad qaadan kartaa yar yar iyo taxadar. Noocaas waxaa loola jeedaa nabarrada rushay, boogaha, cambaarta. Nooca budada ah wuxuu ka caawiyaa xididdada varicose, infakshanka fungal ee cagaha.
Cudurrada faafa iyo cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka 0.5 tsp. budada ku shub 350 ml biyo karkaraya, ku adkeyso 3-4 saacadood iyo filter. Sumoobka keentay cabin 3-4 jeer maalintii qaybta saddexaad ee dhalada nus saac cuntada kadib.
Waa muhiim! Haddii, ka dib markaad bacda ku daboosho boogta, waxaad dareemeysaa raaxo ama cuncun, ka dibna waa lagama maarmaan inaad isla markiiba biyo raacisid biyaha iyo dib u dhigida daaweynta lichen mudo ah.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay decoction:
kalluunka la jajabiyey - 1 tbsp. l.
Cawska qalalan waxaa lagu shubay biyo, la kariyey ilaa 3 daqiiqo, ka dibna ku adkee 40 daqiiqo. Isticmaal daroogada 3-4 jeer maalintii qaybta saddexaad ee muraayadda. Daawada waxaa loo qaataa sida anthelmintic. Sidoo kale, decoction waxay hagaajisaa difaac, si fiican u caawisaa caloosha joogtada ah, waxay caadiyan cadaadiska dhiigga. Macnaheedu waa boogaha, dhaawaca gubashada. Sidoo kale waxaa lagula talinayaa in aad biyo raaciso afka si aad uga takhalustid stomatitis.
Bariisku waxa loo isticmaalaa in lagu daweeyo gubashada, boogaha, infekshanka fungal. Wixii cunto karis ah, waxaad u baahan tahay inaad ku darto 10 g oo ah qalliin la jajabiyey oo leh 50 g oo khudradda ama subagga ah iyo 1 tsp. malab Waa lagama maarmaan in la dalbado macnaheedu waa laba jeer maalintii aagga dhibaato. Waa in loola dhaqmo illaa iyo inta laga bogsanayo.
Usneya-ga wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh, waxaana laga daaweyn karaa cuduro badan oo kala duwan. Isticmaalka lacagaha ku salaysan, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo qiyaasta si looga fogaado falcelinta xun. Waxaa lagula talinayaa inaad la tashato takhtar intaadan bilaabin daaweynta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dheef iyo waxyeello 2020